माधव नेपाललाई बाबुराम भट्टराईले यस्तो सुझाव दिएपछि देशभरका एमालेहरु आक्रोशित ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
माधव नेपाललाई बाबुराम भट्टराईले यस्तो सुझाव दिएपछि देशभरका एमालेहरु आक्रोशित !
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षलाई पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टीमा नफर्कन सुझाव दिएपछि देशभरका एमालेहरु आक्रोशित बनेका छन् । समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष समेत रहेका डा. भट्टराईले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष अर्थात् मूल एमालेमा एकताबद्ध हुने तयारीमा रहेका बेला जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सचेत गराएका हुन् ।
प्रतिगमनलाई कोरोनासँग तुलना गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. भट्टराईले संविधानको शरीर हत्या प्रयास गरेको पहिलो असंंवैधािनक भेरिएन्ट पराजित भए पनि पुनः संविधानको आत्मै मार्ने खालको भेरिएन्ट आउन सक्ने भएकाले ढुक्कसँग पहिलेकै पार्टी वा गुटतिर समाहित नहुन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेको उक्त आग्रहमा उनले माधव नेपालको नाम नलिए पनि उनैलाई संकेत गरेको प्रस्ट हुन्छ । ‘कोरोनाझैं प्रतिगमनको पनि नयाँ भेरिएन्ट आउनसक्छ है १ पहिलो असंवैधानिक भेरिएन्ट पराजित भए पनि दोस्रो संवैधानिक वा अर्ली इलेक्सन भेरिएन्ट आउनसक्छ’, डा. भट्टराईले लेखेका छन्, ‘पहिलोले संविधानको सशरीर हत्या गर्दै थियो भने दोस्रो चाहिँ संविधानको आत्मा मार्ने गरी आउनसक्छ । अतः ढुक्क भएर आ–आाफ्ना पार्टी वा गुटतिर नफर्कौं ।’
हाल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते र नेकपा भंग भइसकेपछि जेठ ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत प्रतिनिधि सभा विघटन गराएका थिए । दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि पुनःस्थापना भएको हो। अदालतले नै ओलीको नियुक्ति असंवैधानिक ठहर गरेपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
नेकपा छँदा नै ओलकिो कदमविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको माधव नेपाल पक्षले एमाले ब्युँतिएपछि पनि आफ्नो विद्रोह जारी राखेको छ । तर हालैका दिनमा यो पक्ष एमाले अर्थात् ओलीसँगै एकताबद्ध हुने प्रयासमा छ । तर अझै कुरा मिलिसकेको छैन । यहि सन्दर्भमा डा. भट्टराईले प्रतिगमनकारी पार्टी वा गुटमा ढुक्क भएर फर्किने अवस्था छैन भनेर सजग गराएका हुन् ।